Korri Kutaa ABO Australia milkiin xumurame; miseensotis qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf murteeffatan. – Oromedia
Home » Uncategorized » Korri Kutaa ABO Australia milkiin xumurame; miseensotis qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf murteeffatan.
(Oromedia, 13 Amajjii 2017) Korri Kutaa ABO Australia kan bara 2016 Amajjii 05 irraa hanga Amajjii 07, 2017 gaggeeffamaa ture milkiin xumurameera.
Korri Kutaa ABO Awusteraaliyaa kun turtii isaa keessatti marii gurguddoo haala yeroo fi hojiilee naannoo irratti xiyyeeffate gaggeessee jira.
Kora kana irratti miseensonni ABO kutaa Awustraliyaa konyaalee Viktooriyaa, Adlaayid, Perth, Sydiny fi Kuwiinsland irraa dhufan irratti hirmaataniiru.
Korri guyyaa lamaa, Amajjii 6 fi 7, 2017 magaalaa Melboornitti adeemsifamaa ture kun xumura irratti ibsa ejjennoo armaan gadii baafateera.
Ibsi ejjennoo Miseensota ABO Kutaa Awustralia
Nuti minseensonni ABO Kora Kutaa ABO Australia kan bara 2016 guyyoota lamaaf gaggeessanne milkiin xumurannee jirra. Kora guyyoota lamaaf, (Amajjii 6 fi 7, 2017) taasisanne kana irrattis haala Qabsoo Bilisummaa saba keenyaa yeroo ammaa keessa jiru, haala sochii, falammii fi wareegama WBO gumaachaa jiruu fi wareegama Qeerroon Oromo Oromiyaa keessaa itti jiran, haala dinagdee fi hawaasummaa, haala siyaasaa fi tattaaffii dhaaba keenya ABOtiin taasisamaa jiru bal’inaan mariyannee jirra.
Marii taasisame kana irrattis hundofnee:
Dhaaba keenya ABO roga hundaan caalaatti jabeessuun barbaachisaa waan taheef;
Tarkaanfii Oromiyaa keessaa WBO fi ittisni ummataa (gandaa) akkasumas keessattuu Qeerroon yeroo ammaa bifa mijjateef hundaan fudhataa jiran cina dhaabbachuun kan yeroon nu irraa barbaadaa jiru waan taheef;
Labsii fi qajeelfama dhaabni keenya ABO yero yerootti nuuf baasuu fi akeeku saffisaan hujii irra olchuun akkaan barbaachisaa waan taheef;
Oromoo, Oromiyaa fi Oromummaa aggaammii diinaa jalaa dandamachiisuu fi mo’icha gonfachiisuun kan yeroon nu irraa eegaa jiru waan taheef;
Ajjechaa fi dhumaatii saba keenyaa guyyuu yaadataa furmaatni isaas qabsoo bilisummaa finiinsuun qofaan akka furamu waan amannuuf;
Ololaa fi afaan-fajjii diinaa fi farreenii fashalsuun dirqama nu irraa eegamaa jiru waan taheef;
Ibsa ejjannoo kanaa gadii dabrsannee jirra:
Dhaaba keenya ABO caalaatti jabeessuuf, hirmaatnaa nu irraa eegamu hundaa bahuuf, gaafatamummaa fi dirqama kutaa keenya irraa eegamu akka qajeelfama dhaabaatti fiixaan baasuuf waadaa keenya haaressina.
Heera, seeraa, kaayyoo naamusaa, fi qajeelfamoota dhaaba keenyaa irratti hundoofnees jaarmayaa keenya jabeessannee dirqama fi gaafatama matayyaa fi waloo akka miseensotaatti nu irraa eegamu bifa hundaan ni baana.
Tarkaanfii WBO, Ittisni Ummataa (Gandaa), keessattuu Qeerroon fudhataa jiran haalaa injifannoo seena-qabeessa tahaa jiraachuu isaatti amanaa waan danda’amu hundaan cina ni dhaabbanna.
Sochii bilisummaa sabni keenya walumaa galatti itti jiru bifa hundaan ni deggerra, ni tumsina.
Ibsa, qajeelfamaa fi murtii dhaabni keenya ABO yero yerootti baasuu fi dabarsu akkuma yeroo kamuu hujii irra akka ooluuf wan nu irraa eegamu hundaan itti gumaachina.
Oromoo, Oromiyaa fi Oromummaa aggaammii diinaa jalaa dandamachiisuu fi mo’icha gonfachiisuun kan yeroon nu irraa eegaa jiru waan taheef kanneen mooraa diinaa keessa taa’anii wareegama seena-dhabilee gumaachaafii jiran ilmaan Oromoo hundi akka isaan hujii ykn qaamaan mooraa qabsoo saba isaaniitti dabalamanii ummata isaaniif falmii barbaachisu hundaa finiinsan yaamicha keenya haaressinaaf.
Ololaa fi afaan-fajjii diinnii fi farreen yero yerootti dhaaba keenya ABO irratti oofan hojiidhaan irra aanuuf murtessannee jirra.
Ajjechaa, dhumaatii fi roorroo diinni ummata keenya irratti walitti fufiinsaan bifa hundaan gaggeessaa jiru balaaleffachaa furmaatni isaas qabsoo jabeessuu qofa waan taheef ilmaan Oromoo hundi alaa fi keessaan birmatnaa bifa hundaa akka waliin cimsinu yaamicha lammummaa Oromiyaa keenya gadi fageenyaan dabarsina; yaamicha kana dhaqqabsiisuu dhaafis waan nurraa eegamu ni raaw’anna.
Kutaa ABO Australia
Amajjii 7 bara 2017
Previous: Deliberately creating confusion in the name of the OLF is a criminal act
Next: Artiist Haayiluu Disaasaa Waggaa 62tti boqate (1955-2017)
rabbi bara 2017 kana bara bilisummaa nuuf haagodhu!